Ari ayuu internet ku iibiyaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jimcaale Mohamed oo ka waramaya fikriadiisa ganacsi Foto: Foto: Kenadid Mohamed
Ari ayuu internet ku iibiyaa
Publicerat torsdag 8 september 2016 kl 10.30
Jimcaale Mohamed waxuu hirgeliyey fikrad ganacsiga oo Soomaaliya iyo caalamka isku xireysa, shaqona loogu abuurayo xoolo-dhaqatada soomaaliya ee abaraahu ka dhameeyeen xoolahii.
Fikradu waxay tahay, beer lagu xanaaneeyo ariga iyo App qofka meel kasta oo uu caalamka ka jooga ari ku iibsan karo xaalada arigiisana kalo socon karo.
- Waxa weeye, neef baad iibsaneysaa, nefkas ilmo ayuu dhalayaa, kadibna waa sii iibineysaa. Waxaana ku dhax iibineysaa isla shabakadda Ari farm, ayuu yeri Jimacaale Moxamed.
Illaa iyo hadda jimcaale beertiisa oo ku taala duleedka Muqadishu waxaa lagu xanaaneeyaan ari kor u dhaafaya 300 oo neef, dhamaantood arigas waxaa iibsadey dad daafaha caalamka ku nool. Waxaana ay hadda gacanta ku hayaan sida uu Jimcaale sheegay dalab ah 100 oo neef oo dad caalamka ku nool ka dalbadeen kuwas oo hadda loog maqan yahay in looga soo iibiyo reer guuraaga. Fikradan ganacsi Jimcaale waxay ku dhalatay dhamaadka gugan oo saxaafadda ka arkay abaaro ku dhuftay geeska Afrika oo xoolohii ka dhameeyey reer miyiga Soomalia. Jimcaale oo asaga ku soo koray miyiga aad ayey u taabatay dhibataada xoolo la’aanta ah ee la soo gudboonaatay reer miyiga.
- Anniga waxaan ka mid ah dadka baadiyaha ku koray oo si fiican u dareemi kara dadkas xaaladooda sida ay aheyd.
Illaa iyo hadda Jimcaale waxuu ku guuleystay in shaqo u abuuro shan qof oo hadda ka shaqeysa xerada lagu xanaaneeyo ari gaaraya 300 00 neef oo iska leeyahiin dad caalamka ku kalo nool. Dadka iska leh arigan ee loo xanaayeeyo intooda badan ku noolyahiin Sweden, switzerland, Jarmalka iyo waddamo kale oo badan. Markay xoolaha ka soo iibinayaan reer guuraagana waxay kaga soo iibiyaan qiimo ka sareeya qiimaha ay ka joogaan suuqa, kadibna waxaa qof ku xiran shabakadiisa ari farm waxuu kaga ku iibsanayaa ariga inta u dhaxeysa 100 illa 150 dollar neef.
- Ujeedkeyga waxuu ahaa shaqo abuuris, si shaqsi ahaan ah ayey tiibatay dhibaatada reer miyiga. Anniga miyiga ayaa ku soo koray marka waxaa doonayey xaaladooda in ay wax ka qabto oo shaqo u abuuro laakiin ma rabin in aan abuuro NGO wax la mid ah balse waxaan rabay in aan abuuro barnaamij faa’ido abuuraya oo celcelin kara oo ganacsi ahaana faa’ido u soo saaraya.
- Aannaga faa’idada noogu jirta waxa weeye, xool markaan iibino faa’idaa noogu jirta, marka xoolaha leh ay ilmaha xoolahooda dhaleen sii iibinayaana faa’idaa noogu jirta komishin baan ka qaadeynaa, xoolaha waxii ay soo saraana sida caanahii wax la midka ahna iyadana waa iibinaa oo faa’idaa noogu jirta